ZIFA Yokumbira CAF Kuti Iuye Kuzoongogora Nhandare yeBarbourfields Zvekare
Vose vane chekuita nemutambo wenhabvu vabatana neveZifa kuedza kuti mutambo we2020 Africa Cup of Nations uriko neAlgeria musi wa 29 Kurume utambirwe muBarbourfields Stadium kwete kune imwe nyika.
VeZifa vapihwa kusvika kupera kwezuva ranhasi neveConfederation of African Football kuti vazivise veCaf kuti varikuda kuti mutambo uyu utambirwe kunyika ipi kana kuti kuitwe imwe ongororo yeBarbourfields Stadium.
Asi vanotungamira nhabvu kuchamhembe kweAfrica veCosafa vakatomhanya-mhamha kare ndokusimbisa veCaf mukupera kwesvondo kuti zvirikuda kugadziriswa muBarbourfields Stadium zvinokwanisa kuitwa musi wa 29 Kurume usati wasvika zvekuti maWarriors anokwanisa kushandisa nhandare iyi.
Izvi zvikatenderwa, veCaf vachazouya kuzoita imwe ongororo kwapera masvondo maviri kubva mangwana apo parikufanira kutanga gadziriso yeBarbourfields zvine mutsindo.
Muraridzi weBlack Rhinos Nesbert Saruchera anoti zvinofadza zvikuru kuti pane kumhanya-mhanya kuri kuitwa kuti mutambo uyu usabviswe munyika muno.
Saruchera anoti Zimbabwe yese inofanira kubatana kuona kuti Barbourfields iyi yagadziriswa achiti iye ane chekubatsira nacho ngaatwasanudze ruoko rwake.
Svondo rapera, mutungamiri weZifa VaFelton Kamambo, vakabudawo pachena vachiti varikutsvaga rubatsiro kuruzhinji rweZimbabwe. Vanotiwo chido chavo kuti matambo uyu utambirwe munyika.
Aimbove mumwe wevatungamiri vePremier Soccer League VaBeadle Musa Gwasira vanonzi vapa kanzuru yeBulawayo zana remasaga esimende pamwe nemafiriji ekuisa mumba yevabati vepembe sezvirikudiwa kuBarbourfields Stadium
MaWarriors ari kufanirwa kusangana neAlgeria mumitambo miviri yakateverana musi wa 23 na 29 Kurume, mitambo iyo mumwe muteveri wechikwata ichi VaObert Masvotore vanoti mWarriors haana chekutya.
VaKamambo vanotiwo matambo iyi yakakosha zvikuru kuZimbabwe kuti ikunde.
Zvichakadaro, vatsigiri vemaWarriors ava varikufara zvikuru nematambiro arikuita machinda avo mhiri kwemakungwa vakatarisana nemitambo neAlgeria iyi.
Chaunza munyuku-nyuku makandirwo ari kuitwa zvibodzwa naTino Kadewere pamwe naKnowledge Musona panguva iyo mazuva aswedera emitambo miviri yakakosha nemaDesert Foxes.
Vatsigiri vemaWarriors varikuda kuti vatambi ava vaite zvavari kuita kuzvikwata zvavo apo vachapfeka nhumbi dzemaWarriors mumitambo ichabuditsa pachena kuti Zimbabwe ine mukana here wekuenda kuAfcon kana kuti kwete.
Kadewere akakanda chibodzwa chake chegumi nepfumbamwe apo LeHavre yekuFrance yakarova Chatteroux 3-0, Musona achiteverawo nechake apo AS Eupen yakakunda Mouscron 2-1 kuBelgium.
Izvi zvasimudza tarisiro yakasimba muvateveri vemaWarriors sezvo Kadewere naMusona vari kutarisirwa kuzotungamira kutsvaga zvibodzwa mumitambo neAlgeria iyi.
Muteveri wemaWarriors VaTitus Goya vanoti vane chivimbo chakasimba nevakomana vekumberi veZimbabwe ava zvekuti vari kuona maWarriors achienda kure.
Zimbabwe inofanira kutora mapoinzi ese kana matatu mumitambo miviri neAlgeria iyi kuti irambe iine mukana wekuenda kumafainari.
Parizvino, maWarriors ari pachinhanho chechipiri mugungano rezvikwata zvina nemapoinzi mana, mapoinzi maviri pasi peAlgeria.
Botswana ine poindi imwechete, Zambia haina kana poindi imwechete.
Zvikwata zviviri kubva mugungano iri ndizvo zvinoenda kumakwikei achaitirwa kuCameroon gore rinouya.